China Cannulated Headless Compression Screw factory na ndị nrụpụta | Shuangyang
Aha aha: Φ2.4 Cannulated Headless Compression ịghasa
Ihe: Ngwunye titanium
• A na-enweta ya ogologo na ogologo ogologo ogologo maka ịgwọ ọtụtụ ihe ngosi.
• 2.4mm Headless Compression Screws bu n'uche maka idozi mkparịta ụka intra-articular na extra-articular na enweghị nkwonkwo nke obere ọkpụkpụ na obere mpekere ọkpụkpụ; arthrodeses nke obere nkwonkwo; bunionectomies na osteotomies, tinyere scaphoid na ọkpụkpụ carpal ndị ọzọ, metacarpals, tarsals, metatarsals, patella, ulnar styloid, capitellum, radial head na radial styloid.
• Họrọ ihe atụpụtara nke ụlọ ọgwụ titanium alloy dị ka ihe dị mkpa, nweta nkasi obi na mgbanwe dị elu
• Uwa nke Switzerland CNC akpachapuru anya nke ogologo oge, igwe oge obula
• Ghasa elu ịmụta pụrụ iche anodizing technology, nwere ike welie ịghasa elu ekweghị ekwe na abrasive eguzogide
Φ0.9 Eriri akpa
1.7 Ngwurugwu ọgwụ mgbochi ọgwụ
SW1.5 Cannulated hexagon sikruuokwomoto
Aha aha: Φ2.7 Cannulated Headless Compression ịghasa
A na-enweta ya ogologo na ogologo ogologo ogologo maka ịgwọ ọtụtụ ihe ngosi.
1.9 Ngwurugwu ọgwụ mgbochi ọgwụ
Aha aha: Φ3.0 Cannulated Headless Compression ịghasa
• Ejiri 3.0mm Headless Compression Screws maka ndozi nke mkparịta ụka intra-articular na extra-articular na enweghị nkwonkwo nke obere ọkpụkpụ na obere mpekere ọkpụkpụ; arthrodeses nke obere nkwonkwo; bunionectomies na osteotomies, tinyere scaphoid na ọkpụkpụ carpal ndị ọzọ, metacarpals, tarsals, metatarsals, patella, ulnar styloid, capitellum, radial head na radial styloid.
1.1 Eriri akpa
2.1 Ngwurugwu ọgwụ mgbochi ọgwụ
Aha aha: Φ3.5 Cannulated Headless Compression ịghasa
• 3.5mm Headless Compression Screws bụ ezubere maka ndozi nke mkparịta ụka intra-articular na extra-articular na nonunions nke obere ọkpụkpụ na obere mpekere ọkpụkpụ; arthrodeses nke obere nkwonkwo; bunionectomies na osteotomies, tinyere scaphoid na ọkpụkpụ carpal ndị ọzọ, metacarpals, tarsals, metatarsals, patella, ulnar styloid, capitellum, radial head na radial styloid.
Φ2.5 Ngwurugwu ọgwụ mgbochi ọgwụ
Aha aha: Φ4.0 Cannulated Headless Compression ịghasa
Φ1.5 Eriri akpa
2.7 Ngwurugwu ọgwụ mgbochi ọgwụ
Ebumnuche Cannulated Screw bụ maka mmezi nke mgbaji ọkpụkpụ, ngwakọta, na osteotomies nke obere na obere ọkpụkpụ ma nwee ihe nkedo na ihe nchacha.
Isi uru nke kposara cannulated bụ na enwere ike itinye ha n'elu waya na-eduzi ma ọ bụ ntụtụ ntuziaka. Akara nke ntuziaka ahụ pere mpe karịa nkedo ahụ nwere ike itinye ya nke ọma site na iji fluoroscopy n'ime ime ụlọ ọrụ. Na mgbakwunye, nyere obere dayameta, a ga-enwe ike ịtugharị ntuziaka ọtụtụ oge ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa maka nhazi ziri ezi na-enweghị oke mbibi ọkpụkpụ.
Site na dayameta nke sitere na -2.4 ruo -7.3, ihe nkedo a na-ekpuchi na-ekpuchi ọtụtụ ihe ngosi ma tinye nkasi obi nye dọkịta na-awa ahụ na ogologo eriri dị iche iche na-enye ya ohere ịhọrọ nkedo kwesịrị ekwesị maka mgbaji ahụ enyere.
A na-etinye kposara niile maka iji ya na waya eji eduzi. Ihe nkedo ọ bụla na-eji akwụkwọ ezé ezé ezé ma ọ bụ kpamkpam. A na-ejikarị klọọkụ ọkpụkpụ eme ihe na pelvis, hip, ikpere, nkwonkwo ụkwụ, na ụkwụ. Ọkpụkpụ femoral, mgbapu nkwonkwo sacroiliac, platebial plateau na femoral intercondylar fractures, mgbaji ọkpụkpụ calcaneal, ọkpụkpụ fractures, nkwonkwo ụkwụ nkwonkwo ụkwụ, subtalar arthrodesis, mgbaji nke distal femur, na humeral, olecranon ngwa.
A na-echekwa kposara iji mee ihe na waya ntuziaka yana ịghasa ọ bụla dị n'ụdị eri ma ọ bụ zuru oke. Emebere cannulation ka ọ dị ntakịrị ka ọ bụrụ nke na-emebi emebi. Enwere ike iji kposara nwere ike daa otu ọkpụkpụ ọkpụkpụ na nke ọzọ, ebe akụkụ nke ọkpụkpụ ahụ na-ejide eriri nke ịghasa wee dọrọ ya gaa n'akụkụ mpempe akụkụ dị n'akụkụ isi nke ịghasa. A na-ezube kposara zuru ezu iji mee ka ọkpụkpụ gbajie na-enweghị obere mkpakọ gafee mgbaji.
Ọnụ ego na-arịwanye elu nke ahụike na usoro ịkwụ ụgwọ na-eso ya na-eduga na nhọrọ nhọrọ dị ọnụ ala dị ka kposara ndị a na-akwụ ụgwọ N'ime mgbaji ndị na-enweghị ebe obibi, kposara nwere ike inye nsonaazụ ahụike dị ka nhọrọ ọnụahịa dị elu.
Emere ya iji belata iwe anụ ahụ dị nro ma e jiri ya tụnyere isi ịghasa.
Ezubere ihe nkedo Self-Tapping iji kwado ntinye nke ịghasa ma nwee ike iwepụ mkpa ọpịpị na ụfọdụ.
Nke gara aga: Ihe nkedo
Osote: Cannulated Mkpakọ ịghasa
Orthopedic ckingkpọchi ịghasa
Titanium ckingkpọchi Ọkpụkpụ rewghasa
Nsogbu ckingkpọchi Ọkpụkpụ rewgha
Ofdị Lokpọchi Ọkpụkpụ rewgha
Multi-axial Proximal Femur kpochidoro efere
Multi-axial Medial Tibia Plateau Lokpọchi efere -...
Volar Dorsal kpochidoro efere
4.0 Series Kwụ Ọsọ akpọchi efere